Izixhobo zokugqobhoza abavelisi, abaxhasi - China izixhobo zokugqobhoza izixhobo
Iifayile ezili-12 zokuBhoboza isiXhobo seKhonkco seKhonkco seNdlebe seMpumlo
I-12pcs Isixhobo se-perforation isixhobo sekhithi Igama: Iipcs ezili-12 zokugqobhoza ubucwebe beseti Ubungakanani: 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0mm Ukusetyenziswa: Umvambo kunye nezinto zokubhoboza: Izixhobo zensimbi engenanto I-12 yentsimbi yokufaka i-1.6 ukuya kwi-11mm. Ukufakwa kweekhowuni zizinto ezandisiweyo (okanye izithuba) ezinesithukuthezi esisekweni ukuze zikwazi ukutyhalwa yigugu ofuna ukuyifaka njengomsesane umzekelo. Le khithi yokufaka ikhowuni ibandakanya obu bungakanani bulandelayo (umahluko +/- 0.1mm): 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.6mm, 5mm, 6mm, 7mm ...
I-8 ii-pcs zeNaliti zeNtsimbi zeNtsimbi ezingenazintsimbi zineeweweers zeTattoo yomzimba kunye nesiXhobo sokuBhoboza
Utyando lwensimbi Isixhobo seLusu Indlebe uLwimi Sepum Izixhobo zokugqobhoza Imilebe yokuQinisa isiXhobo sokuBhoboza isiXhobo sokuSeta ii-8pcs zokugqobhoza umzimba zeKit 8pcs ukugqobhoza iipleyiti kusete Ukusetyenziswa: Izinto zokubhoboza izixhobo: Isinyithi, iPlastikhi, ithambo (Ukuphatha) Umbala: Imibala eyahlukeneyo iphatha Iphakheji ekhoyo: Isikhumba ibhokisi 8PC INKXASO YOKUGQIBELA INGXELO YOMSEBENZI WOKWENZIWA KWESITIMBI SONKE ESIFANELEKILEYO NGOKUFANELEKILEYO UKWANELiseka NOKUXABISWA KWEMALI Iinkcukacha: Ingubo yokubhoboza umzimba womzimba, yenza umzimba wakho ...
1pc Tattoo Bead Ball Grabber 4 Uzipho lwentsimbi engagqwali Gem Holder Body Piercing Isixhobo
I-Tattoo Bead Ball 4 Claw Grabber Isixhobo sokuBamba i-Stainless yokuBhoboza iBhola yokuSusa ukuFakelwa kweNkcazo yeMveliso Umnini weentsimbi wenzelwe ngokukodwa ubuhlalu be tattoo, ukubanjwa kweebhola kunye nezinye izinto zokubamba. Isinyithi engenasici kunye nobunzima bokukhanya, bomelele kwaye kulula ukubuthwala. Iimpawu: Zenziwe ngentsimbi engenasici, ihlala ixesha elide Uyilo isibambo Anti-skid, bekhululekile ukuba ubambe. Yenzelwe ukubamba ubuhlalu be tattoo kunye neebhola. Ukulungele ukubamba idayimane okanye ilitye elincinci. Imilenze ...
Umzimba oQinisekisiweyo wokuQoqa iHemostat Forceps kunye nePlants
Izinto eziphathekayo: I-316L i-Stainless Steel Zonke i-316L zeMedical ze-Stainless Steel, unokusebenzisa ngokukhuselekileyo.KungumNcedisi olungileyo kuMsebenzi wakho wokugqobhoza 100% Umgangatho omtsha kunye nomgangatho ophezulu. Izinto ezilahlwayo kunye nezinto ezichasayo. Yenziwe ngentsimbi eshayinayo. Ilula kwaye ayinasulelo Iphakheji 1 yeepcs Isixhobo sokugqobhoza Ulwakhiwo olomeleleyo: Izinto zokubhoboza umzimba zinokukhubazeka kumaqondo obushushu aphezulu. Iiplisi zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ulwakhiwo olomeleleyo kunye nokuqina. Iipleyiti zenziwe ngobunono ukuze ...
1) Ubukhali obukhali kunye nokuBhoboza ngokulula 2) Kuqinisekisiwe nge-ISO 9001 ukucaciswa kunye nesatifikethi saseYurophu se-0197, Umntu ngamnye upakishwe kwaye wafakwa ngaphambili ngegesi ye-EO, 3) Inzalo yi-Ethylene Oxide. Non-ityhefu non-pyrogenic. Ukutshabalalisa emva kokusetyenziswa kube kanye. 4) 50pcs kwiphakheji nganye. Uhlobo lweMveliso: Catheter Tattoo Body piercing Needle Material: 316 Medical sterilizing stainless steel Size: 14G, 16G, 18G, 20G Color: Packing Colorful: 50pcs / box What is the specification for MOLONG Tattoo Piercing Needles? M ...
I-100PCS / Ibhokisi enye ngaBodwa abazimeleyo baPakishe ngokuBulala ngokuBulala umzimba ngokuThoba inaliti
Inaliti yokubhoboza umzimba ngenaliti, i-Independent Pack yokugqobhoza inaliti yokuTyhoboza iNtloko yokuTyhoboza umzimba yeNaliti Ubungakanani obuBodwa obuPhihliweyo 20G = 0.8mm, 18G = 1.0mm, 16G = 1.2mm, 14G = 1.6mm, 13G = 1.8mm, 12G = 2.0mm. Ubungakanani: 20G 18G 16G 14G 13G 12G Sebenzisa i-316 yentsimbi yezonyango, ikhuseleke ngakumbi kwaye isempilweni, ukupakisha okulahlwayo, okucociweyo nge-EO Ukupakisha kweGesi: 100PCS / ibhokisi Uhlobo lweMveliso: Ukuhlaba inaliti yeTattoo Izinto: 316 yezonyango ye-sterilizing insimbi engenazingxaki Ubungakanani: 12G, 13G, 14G , 16G, 18G, 20G Umbala: Ubude besilivere: 50mm Specificat ...
Inzalo engenazintsholongwane Banokubulawa iinaliti umzimba
Inaliti yokulahla / inaliti egqobileyo Ukusetyenziswa kweMveliso: Inokusetyenziselwa ukugqobhoza kunye nokugqobhoza impumlo yomzimba, isangqa sebele, isangqa sembumba, umngxunya wendlebe, njl njl. Ukupakishwa kwemveliso: ikhuselekile kwaye inempilo, incam yenaliti ibukhali kakhulu, umsebenzi ubuthathaka, isicwebezelisi silungile, kwaye imigaqo igqityiwe! Zonke iinaliti zixhotyiswe kwangaphambili ngegesi ye-EO. (Ethylene oxide) Igama: ...
I-5PCS kunye ne-3PCS yokugqobhoza i-Forceps Kit yokugqobhoza
Izixhobo zokuBhoboza umzimba weKhono leNkaba Izixhobo zokugqobhoza ulwimi lwendlebe- Izixhobo zokufaka igama Igama lomkhiqizo: Ukugqobhoza amandla okuTattoo Umsebenzi wokuSebenza: Ukubhoboza kunye nezinto zoMvambo: Iinqwelomoya zeAluminium ingxubevange CC-008 5PCS Ukubhoboza iitatoo Ukubhoboza iKiti yokuPakisha kubandakanya umsesane wokuvala intsimbi e-1 I-forester forcep 1 septum forcep 1 slotted pennington forcep 1 icala le-alloy 1 yokufundisa i-VCD ezinye iigugu zokuhlaba ezinye iinaliti zokugqobhoza CC-009 3PCS Ukubhoboza i-Tattoo Ukubhoboza uKi ...